Ilay vahiny tsy nasaina (Dan. 5:5-8)
Vakio ny Dan. 5:5-8. Inona no mitranga eto? Nahoana no nanao ny zavatra nataony ny mpanjaka Belsazara? Amin'ny lafiny inona no itovian'io tantara io amin'ny tantara ao amin'ny Dan. 2? Nahoana no zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra io fitoviana io? (Mba hanampiana anao hamaly io fanontaniana farany io, dia vakio ny Sal. 96:5 sy ny Kol. 1:15-17.)
Inona ny zavatra voalohany nataon'i Belsazara? Nanao izay nataon'i Nebôkadnezara tamin'ny lasa ihany izy (Dan. 2:2; Dan. 4:7): nampiantso ny mpisikidy sy ny Kaldeanina ary ny mpanandro izy mba hanazava ilay sora-tànana teo amin'ny rindrina. Mba hahazoana antoka fa hanao izay rehetra azony atao izy ireo, dia nampanantena ny hanolotra azy ireo fanomezana sy voninahitra maro ny mpanjaka. Ireto avy izany: (1) akanjo volomparasy, izay loko fitondran'ny fianakavian'ny mpanjaka tamin'ny andron'ny Baiboly (Est. 8:15); (2) rojo volamena, izay famantarana ny toerana ambony eo amin'ny fiarahamonina (Gen. 41:42); ary (3) ny toeran'ny mpanapaka fahatelo eo amin'ny fanjakana. Ny mpanapaka voalohany tao Babilôna tamin'izay dia ny mpanjaka Nabonidosa, rain'i Belsazara. I Belsazara kosa no mpanapaka faharoa. Koa naneho tsara ny toe-java-nisy ara-tantara tea amin'i Babilôna tamin'izany fotoana izany io valisoa farany io. Na dia teo aza anefa ireo valisoa maro ireo, dia tsy nahavita nanazava ilay sora-tanana indray ireo olon-kendry ireo.
Niezaka nitady fahendrena tany amin'ny toerana tsy sahaza ny mpanjaka. Tsy afaka nanazava ny hevitr'ilay hafatra mantsy ireo olon-kendrin'i Babilôna. Marina fa nosoratana tamin'ny fitenin'izy ireo izany, tamin'ny teny arameanina, saingy tsy azon'ireo olon-kendry ny heviny. Manampy antsika hahatakatra ny antony i Isaia: "Ho foana ny fahendrena kendriny, and tsy ho hita ny fahalalaniny mazava sainany" - Isa. 29:14. Rehefa avy namerina io andininy io ny apostôly Paoly, dia hoy izy: "Aiza ny hendry? Aiza ny mpanora-dalana? Aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampodin'Andriamanitra ho fahadalana va ny fahendren'izao tontolo izao? Fa satria, na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy hahatonga izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitorian-teny no sitrak'Andriamanitra hamonjeny izay mino" - 1 Kôr. 1:20,21.
Manan-danja loatra ny fahamarinana sasany ka tsy havela hiezaka handinika samirery ny heviny ny olombelona. Izany no antony tsy maintsy anehoan'Andriamanitra ireny fahamarinana ireny amintsika.
Eritrereto ireo valisoa homen'ny mpanjaka ho an'ireo olon-kendriny. Inona anefa no hitranga tsy ho ela amin'i Babilona? Inona no ambaran'izany momba ny fiseran'ny zavatra eto an-tany? Inona koa no ambaran'izany amintsika momba ny hoe nahoana no ilaintsika mandrakariva ny mametraka an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny zavatra rehetra ataontsika?